Loko Weather Station
Toeram-piantsonan'ny toetr'andro marobe
Toeram-pianaran'ny toetr'andro Pro
Toby Thermo-Hygro Wireless
Thermometer sakafo azo aforitra
Thermometer sakafo mahitsy
Ny tombony amin'ny orinasa
Andiany efatra vokatra
Famantaranandro fanairana radio nomerika miaraka amin'ny kalandrie
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-08
Ity famantaranandro fanairana radio mifehy ny radio miaraka amin'ny fiasan'ny kalandrie ity dia mijery tsara ao amin'ny birao eo amin'ny birao, fa koa ao an-trano ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fatoriana. Izy io dia manana fampisehoana tarehimarika lehibe Ny fampisehoana lehibe dia mampiseho anao ny fijerena ny volana manontolo, ao anatin'izany ny herinandro, taona, volana, daty, andro fiasana. Io dia mety ho...
Fahatongavana Vaovao – Andian-tobiana Toetrandro
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-29
Emate mamolavola, mamolavola, manamboatra ary mivarotra vokatra elektronika nomerika marobe, anisan'izany ny tobim-pamokarana toetr'andro, thermometer hygrometer ary famantaranandro. Ny ekipanay dia ahitana mpamorona hevitra 3 sy injeniera teknika matihanina 8, manome serivisy OEM & ODM ...
Mitadiava anay ao amin'ny 5.2K27, Foara Canton faha-130
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-16
Hanatrika ny Foara Canton faha-130 any Guangzhou, Sina i Emate. Mandritra ny foara dia hanolotra ireo tonga vaovao sy maodely fivarotana mafana izahay, anisan'izany ny tobim-pamokarana toetr'andro, tobim-toetr'andro WIFI, thermo-hygrometer ary famantaranandro. Ary koa ny vokatra vaovao - vokatra fanondrahana an-trano izay mampiasa TUYA sys...
Inona no fiantraikan'ny toetr'andro amintsika
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-18
Ny fiantraikan'ny toetr'andro dia mizara ho sokajy folo manaraka indrindra: 1. Ao anatin'ny toetr'andro mahery vaika toy ny rivo-doza sy tsunami, dia tsy afaka mandeha ny olona ary mety hampidi-doza ny famokarana sy ny fiainana; 2. Mandritra ny hain-tany sy ny tondra-drano dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny famokarana fambolena izany, izay fototra...
Emate dia hanatrika 2021 China Cross-Border E-Commerce Trade Fair amin'ny Sep.24-26
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-20
The China Cross-border E-commerce Fair dia tsenam-barotra e-varotra 6P miampita sisintany hampifandray ny famokarana sinoa sy ny fanjifana eran-tany, ary ny fampidirana ireo loharanon-karena ara-tontolo iainana miampita sisintany mandroso haingana. Atao indroa isan-taona ny lohataona sy ny fararano, miaraka amin’ny fampirantiana lohataona...
Torohevitra hialana amin'ny loza aorian'ny oram-be sy ny tondra-drano!
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-13
Miverena any aoriana! Nanomboka tamin'ny 08:00 ny 20 Jolay ka hatramin'ny 06:00 tamin'ny 21 Jolay 2021, nisy oram-be tany afovoany sy avaratra Henan, ary nisy oram-be (250-350 mm) tany amin'ny faritra Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng, Zhoukou, Jiaozuo, Ny velarantanin'i Zhengzhou dia 500 ～657 mm; ny orana ambony indrindra isan'ora...
Emate dia hanatrika 2021 China Cross-Border E-Commerce Trade Fair amin'ny 15-17 aogositra 2021
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-30
The China Cross-border E-commerce Fair dia tsenam-barotra e-varotra 6P miampita sisintany hampifandray ny famokarana sinoa sy ny fanjifana eran-tany, ary ny fampidirana ireo loharanon-karena ara-tontolo iainana miampita sisintany mandroso haingana. Atao indroa isan-taona ny lohataona sy ny fararano, miaraka amin’ny sprin...
Ahoana no ahafahan'ny varotra e-varotra miampita sisintany amin'ny areti-mifindra?
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-23
Vao haingana, ny vaovao momba ny "Globalegrow E-commerce dia napetraka ho bankirompitra sy fanavaozana" niseho tao amin'ny Internet fikarohana mafana. Ny antony iray nahasarika ny sain'ny maro an'io raharaha io dia ny Globalegrow dia sampana iray manontolo amin'ny A-share voatanisa "cros...
Tonga ny Solstice Summer
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-22
Nampiditra ny solstice fahavaratra tamin'ity taona ity isika tamin'ny 22 Jona, 13 Mey amin'ny kalandrie volana. Ny solstice amin'ny fahavaratra no fe-potoana voalohany amin'ny masoandro hofaritana amin'ny fe-potoana efatra amby roapolo amin'ny masoandro, izay midika hoe fanombohana ofisialy ny andro mafana, ary avy eo dia mihamafana hatrany ny andro. ...
Torolàlana momba ny maripana fandrahoana ambany indrindra azo antoka
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-16
Ny "loko sy hanitra ary tsiro" no tena heverin'ny olona rehefa mifidy sakafo. Ny loko sy ny hanitra ary ny tsiro dia matetika no mamaritra ny fomba fahandro ny sakafo. Ny "Tatitry ny fikarohana momba ny sakafo voalohany" navoakan'ny Foiben'ny Hong Kong momba ny fiarovana ara-tsakafo dia nilaza fa ny ...
lakilen'ny fandrafetana ny vokatra elektronika mpanjifa
Ny vokatra elektronika ho an'ny mpanjifa dia manondro ireo vokatra elektronika natao manodidina ny fampiharana mpanjifa ary mifandray akaiky amin'ny fiainana, asa ary fialamboly. Ny tanjon'ny vokatra elektronika toy izany dia ny ahafahan'ny mpanjifa misafidy malalaka, mampiasa ary mankafy. Miaraka amin'ny...
Famakafakana fironana momba ny famonosana ny elektronika mpanjifa
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-09
Overview Ny faharetana dia eo an-tampon'ny lisitra, miaraka amin'ireo marika manomboka mampihena ny fampiasana plastika ary manome vahana ny fisafidianana fitaovana miaro ny tontolo iainana. Ny fifantohana amin'ny fampiasa dia manamora ny fanokafana ny fonosana. Microsoft dia nitarika ny fonosana ...
12 Manaraka > >> Pejy 1/2
Tongasoa eto amin'ny consultation
Ny sandan'ny anjara Emate Electronics Co. Ltd.